Gorfeyntii Silsilad Maanseedda Miimley. Qaybtii 3aad | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Gorfeyntii Silsilad Maanseedda Miimley. Qaybtii 3aad
Sisilad maanseeddii Guba iyo Sisilad maanseedda Miimley waxa ay iska shabbahaan sogor-doh la’aanta ama sarbeeb la’aanta. Hasa yeeshee, Guba waxa ay cudurdaar ku helaysaa wakhtigaa, ay ku soo beegantay, qabiilku wuxuu ku jiray halka maanta Qaranku ku jiro. Haddii maansadii Mudduci ee ay ku bilaabmatay Miimley aan hore idiinkula wadaagay, bal haddana aan idin la wadaago maansadii Guba. Cali Dhuux Aadan wuxu yidhi:
HALAC-DHEERE: Silsiladda ku caan baxday ‘Halac-dheere’ meelaha qaarkoodna looga yaqaanno ‘Haabay’ waxaa la qiyaasaa in ay curatay intii u dhexaysay 1911 ilaa 1920. Waxay ka bilaabantay deegaanka Hobyo, laakiin waxa ay isaga dabqaadday Hobyo illaa Doolloiyo deegaanno kale oo ay ku faaftay.
GUBA: Curashada Silsiladda ‘Guba’ waxaa lagu male weyn yahay in ay ahayd hilaaddii 1923. Wakhtigaas oo ku beegnaa wax yar uun kadib jabkii ciidamadii Daraawiishta. Walow ay taariikhdu weriso in magaca ‘Guba’ uu ka horreeyay gabayadan hadda loo yaqaanno.
SILSILADDA XAYDHA: Taxanaha maanseed ee ku magac-baxay Silsiladda Xaydhu, ku-sinnaan 1941 ayaa ay ka aloosantay Burco iyo hawdkeeda, waxaana curashadiisii sabab u ahaa wadar safar ahaa oo ardaa ahaan is xigta, balse waxaa afsaarta ka rogay Xirsi Caamir oo subag loo diray iyo dhaliishii ba’nayd ee kaga timid Weerar Cali Geelle oo ku eedeeyay in aanu wax habboon keenin. Kaftan qoonsimaad iyo garsoor ayaa lagu tilmaamaa in ay ku saabsanayd, laakiin mededaalo jidka iyo jidaasha la isku dhaafiyaana kama ay madhnayn. Iyada qudheeda waxaa isu hal celiyey maansoyahanndii xiligaa jiray qaarkood sida Xirsi Caamir, Weerar Cali Geelle, Maxamed Nuur Abokor “Huube”, Diiriye Aw Guuleed, Aar Xanduleiyo gabyaa kale oo waaweyn.”